July 5, 2021 July 5, 2021 N88LeaveaComment on के देवयानी राणाको प्रेममा दिपेन्द्र पागल थिए ?
काठमाडाैं । दरबार ह -त्या का-ण्डको छानविन प्रतिवेदन अनुसार दिपेन्द्रले नै आफ्ना परिवारका सदस्यहरूको ह- त्या गरेका थिए । यसको मुख्य कारण देवयानी राणा भनिएको छ । पाका नेता पशुपति शमशेर राणाकी छोरी हुन् देवियानी । पढेलेखेकी आकर्षक थिइन् । उनको प्रेममा दिपेन्द्र पा ग ल भए नभएको देवयानीले केही बताएकी छैनन् । दिपेन्द्रसँग नजिक […]
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले माओवादी केन्द्र त्याग्नुभएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत रहनुभएका नेता श्रेष्ठले राष्ट्रियसभा बैठकमा माओवादी केन्द्र त्यागेको प्रमाण दिनुभएको हो । नेकपा हुँदा नेकपा एमालेका मतदाताको भोटबाट राष्ट्रियसभा निर्वाचित हुनुभएका श्रेष्ठले आजको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसदका लागि तय गरिएको रोहमा नबसी कांग्रेसतिर लाग्नुभएको छ । बैठकमा श्रेष्ठले आफ्नो दलका […]
July 5, 2021 N88LeaveaComment on कोमल वलीले माधव नेपाललाई कटाक्ष गर्दै भनिन् ‘बेवारिसे बाँदर’
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य कोमल वलीले माधव नेपाल समुहले पार्टीभित्र गरिरहेको अराजक कामलाई लिएर कडा प्रहारसहित कविता बाचन गर्नुभएको छ । एमाले नेतृसमेत रहनुभएकी सांसद वलीले आजको राष्ट्रियसभा बैठकमा माधव समुहलाई बाँदरको संज्ञा दिँदै कविता बाचन गर्नुभएको हो । राष्ट्रियसभाको विशेष समयमा लिखित सम्बोधन गर्नुभएकी वलीले बाँदरको घर हुँदैन भन्दै एमालेभित्रको बिवादबारे कविता प्रस्तुत गर्नुभयो […]
एमालेको कार्यदल ब्युँतियो, पार्टी एक भएर अघि बढ्ने विश्वास
July 5, 2021 N88LeaveaComment on एमालेको कार्यदल ब्युँतियो, पार्टी एक भएर अघि बढ्ने विश्वास
काठमाडौँ। पार्टीको विवाद समाधानका लागि गठित नेकपा एमालेको १० सदस्यीय कार्यदल ब्युँतिएको छ । अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेता भीम रावलबीच आइतबार भएको वार्तापछि कार्यदल ब्यूँत्याइएको हो । कार्यदल सक्रिय बनेसँगै सोमबारबाटै अनौपचारिक वार्तामा भएका छलफललाई आधार मानेर सहमतिका लागि प्रयास सुरु भएका छन् । नेताहरुले अब एमाले एक भएर अघि बढ्ने […]
विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाएकोमा एमालेभित्रै भाँडभैलो, क-कसलाई बुझेन चित्त ?
July 5, 2021 N88LeaveaComment on विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाएकोमा एमालेभित्रै भाँडभैलो, क-कसलाई बुझेन चित्त ?
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले गलत मान्छे विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाउँदा अहिलेको अवस्था आएको दाबी गरेकी छन् । विपक्षी गठबन्धनमा रहेका ५ राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनले राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा नेत्री झाँक्रीले आफूले त्यतिबेलै विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाउन नहुने सुझाव दिएको भए पनि नेतृत्वले नमान्दा संविधानको संरक्षण नभएको बताएकी छन् […]
चर्चित हास्यसिरियलकी कलाकार रक्षा श्रेष्ठ आमा बनिन्
July 5, 2021 N88LeaveaComment on चर्चित हास्यसिरियलकी कलाकार रक्षा श्रेष्ठ आमा बनिन्
काठमाडौँ । भद्रगोल, सक्किगोनी, लगायतका चर्चित सिरियलकी कलाकार रक्षा श्रेष्ठ आमा बनिन् । छोरालाई जन्मदिएपछि रक्षा र उनका पति छन् खुशीले फुरुगं । सुत्केरी भए पनि रक्षाले छिट्टै फेरी सक्किगोनीमा अभिनय गर्ने भइन् । रक्षालाई यति मोटो रकम दिन जिग्री पाँडे भए तयार । कलाकार रक्षा श्रेष्ठ आमा बन्ने खुलासा भएको छ । हास्य टेलिसिरियल […]
घना जंगलकोबीचमा यस्तो अवस्थामा फेला पर्यो ९ दिनदेखि हराईरहेकी सुजिताको शव
July 5, 2021 N88LeaveaComment on घना जंगलकोबीचमा यस्तो अवस्थामा फेला पर्यो ९ दिनदेखि हराईरहेकी सुजिताको शव
भरतपुर । चितवनको राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर ३ की २२ वर्षीया सुजिता भण्डारीको शव भिरमा फेला परेको छ।राप्तीकै ब्रम्हस्थानी सामुदायिक वनको भिरालो जमिनमा भण्डारीको शव आइतबार फेला परेको थियो। उक्त शव सोमबार प्रहरीले पोस्टमार्टमका लागि भरतपुर अस्पताल ल्याउँदैछ। सो क्रममा भण्डारीका परिवार र आफन्त तथा स्थानीय बासिन्दाले राजमार्ग अवरूद्ध पारेका छन्। भण्डारी बेपत्ता भएकोबारे प्रहरीलाई […]
प्रधानमन्त्रीसहित नेपालका यी शीर्ष नेतालाई भोलि चिनियाँ राष्ट्रपतिले प्रशिक्षण दिने
July 5, 2021 N88LeaveaComment on प्रधानमन्त्रीसहित नेपालका यी शीर्ष नेतालाई भोलि चिनियाँ राष्ट्रपतिले प्रशिक्षण दिने
काठमाडौं । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको सय वर्ष पुगेको अवसरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङले भोलि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भर्चुअल छलफल गर्ने भएका छन् । मंगलबार अपरान्ह हुने छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागि हुने जानकारी उनको सचिवालयले दिएको छ । प्रधानमन्त्रीका संचार विज्ञ रामशरण बजगार्ईंका अनुसार जुम मिटिङमार्फत हुने भर्चुअल छलफलमा ओली […]
July 5, 2021 N88LeaveaComment on सरकारको विरोधमा राष्ट्रिय सभामा कालो टोपी प्रदर्शन गर्ने काे हाे ?
काठमाडाैं । सरकारको विरोधमा नेपाली कांग्रेसका सांसदले राष्ट्रिय सभामा कालो टोपी प्रदर्शन गरेका छन्। सोमबार कांग्रेस सांसद रमेशजंग रायमाझीले कालो टोपी प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा कालो टोपी प्रदर्शन गरेको उनको भनाइ थियो। सांसद रायमाझीले भने, “आज (कालो) क्याप लगाएर प्रवेश गरेको छु। सदनमा कालो झण्डा देखाउने अवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध सदनले थाहा […]
क–कसलाई दिइँदैछ चीनबाट खरिद गरिएको भेरोसेल खोप ?
July 5, 2021 N88LeaveaComment on क–कसलाई दिइँदैछ चीनबाट खरिद गरिएको भेरोसेल खोप ?
काठमाडौं । पौने आठ लाख नेपालीले पहिलो मात्रा र झन्डै तीन लाख नेपालीले दुवै मात्रा लगाएको चिनियाँ भेरोसेल खोप थप आपूर्ति भएपछि उमेर समूह र विपद्‌बाट प्रभावित क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिएर वितरण गरिने अधिकारीहरूले बताएका छन् । हालसम्म नेपालले चीनबाट अनुदानमा पाएको १८ लाख भेरोसेल खोपमध्ये १३ लाख ७३ हजार मात्रा खोप वितरण भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले […]